Wadahadal dhexmaray Wefti KULMIYE ka socda oo ku sugan Beijing iyo Wasaaradda Gaashaandhigga Shiinaha | Berberanews.com
Home WARARKA Wadahadal dhexmaray Wefti KULMIYE ka socda oo ku sugan Beijing iyo Wasaaradda...
Wadahadal dhexmaray Wefti KULMIYE ka socda oo ku sugan Beijing iyo Wasaaradda Gaashaandhigga Shiinaha
Hargeysa-(Berberanews)- Wefti uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Xisbiga talada haya ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, ayaa shalay kulan la yeeshay Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga dawladda Shiinaha, halkaas oo ay safar ku joogeen tan iyo sabtidi toddobaadkan.
Xubnaha Weftiga KULMIYE iyo Saraakiisha Wasaaradda Gaashaandhigga Shiinuhu waxay ka wadahadleen arrimo kala duwan oo la xidhiidha dhinacyada amniga sida ka hortagga Budhcad-badeedda iyo wixii la mid ah. Af-hayeenka Xisbiga Muxaafidka ah ee Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo kulankaas iyo waxa lagaga wadahadlay uga warramay Horn Cable TV, ayaa faahfaahiyey nuxurka kulankaas iyo ujeeddadiisa rasmiga ah.
“Somaliland ma doonayso inay Dawladda Shinaha la samaysato Cilaaqaad xagga Millateriga ah, annagu waxaannu meesha u nimi waxa weeye sida Dunida hore martay sida Shiinaha oo kale oo waxaannu doonaynaa inaannu kobcinno Cilaaqaadkeenna siyaasadeed. annagu taas ayaanu u nimid.” Sidaa ayuu yidhi Afhayeenka KULMIYE Maxamed Kaahin.
Maxamed Kaahin Axmed oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi; “Wasaarada Gashaandhigga ee Shinaha ayaannu la kulanay oo waxaannu ka wadahadalnay dhibaatada Budhcad-badeedda gaar ahaan dhinaca Somaliland oo Budhcad-badeedka waxa in badan dalkeenna lagu qab-qabtay Budhcad-badeed iyaga oo Biyaheenna soo galay. Sidoo kale waxaannu ka wadahadalnay dadka xag jirka ah.”
Afhayeenka KULMIYE Maxamed Kaahin, waxa kale oo uu sheegay inay la kulmeen Jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan Waddanka Shiinaha, gaar ahaan Caasimadda dalkaas ee Beijing. “Jaaliyadda Somaliland ee dalkaas ku nool sifiican ayey noo soo dhaweyeen, oo aad bay u wacan yihiin, markaa waxaannu tagaynaa Gobolka ay ku badan yihiin dadka reer Somaliland ee waddankan Shiinaha ku dhaqani.” Sidaa ayuu yidhi Maxamed Kaahin Axmed oo ka mid ah Masuuliyiinta Weftiga Xisbiga KULMIYE ee ku sugan dalka Shiinaha.
Previous articleWeriye ka tirsan Telefishinka Horn-Cable oo Mudisho lagu dilay iyo Ururka Saxaafadda Somaliland oo cambaareeyey
Next articleNorth Korean leader Kim Jong-Il dead at 69!